ကျမရဲ့နေရာလေး: ညတရေးနိုးထရခြင်း...(sixth sense 2)
Posted by မီးမီးငယ် at 8:21 AM
Anonymous September 14, 2013 9:40 AM
ကိုယ်တခါအလုပ်ထဲမှာတုန်းကတောထဲကနေလမ်းလျှောက်ပြီးအိမ်ပြန်တာသူငယ်ချင်းတွေအများကြီး။ အများကြီးဆိုတော့စကားတွေပြောသီချင်းတွေဆုိုဘေးဘီအောက်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူး။ တနေရာမှာလျှောက်နေရင်းနဲ့ ကိုယ်တန့် ခနဲရပ်လိုက်တယ်။ ဘာမှလည်းသဲသဲကွဲကွဲမြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။ တောထဲဆုိုတော့ပိန်းနေပြီးကြယ်ရောင်ပဲရှိတာ။
အဲဒီမှာ ကုိုယ်တုို့ ရှေ့ မှာ မြွေတစ်ကောင်ခွေနေတာ။ သစ်ကုိုင်းကျိုးတွေနဲ့ ရှုပ်နေတာ။
အဲဒီမြွေကိုကုိုယ်မမြင်ဘူး။ ကုိုယ်ဘာကြောင့်ရပ်တာလည်းကိုယ်လည်းမသိဘူး။ တောထဲကလမ်းဆုိုတော့လမ်းပေါ်မှာသစ်ရွက်တွေသစ်ကိုင်းတွေ မကြာခဏတွေ့ နေရတာလေ။သူငယ်ချင်းကအဲတော့မှဓါတ်မီးနဲ့ ဟုိုထုိုးဒီထုိုးကြည့်ရင်းမြင်တာ။ တောထဲသွားရင်ဓါတ်မီးကိုခြွေတာကြရတယ်။ ဆက်တုိုက်ထုိုးထားရင်ခဏလေးနဲ့ ဓါတ်ခဲကုန်သွားရော။
မီးမီးငယ် September 15, 2013 2:33 PM
စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ ၊စိတ်ကိုအလိုမလိုက်ဖို့ လေ့လာရင်းက၊
Anonymous September 15, 2013 4:43 PM
မီးမီးငယ် September 16, 2013 9:10 PM
San Htun September 15, 2013 8:04 PM
"ကျမတို့ တွေညညအိပ်ယာကနေရုတ်တရက်လန့် နိုးလာရတဲ့အကြောင်းရင်းများစွာထဲကတခုတော့၊
ဆီးသွားချင်လို့ ပါဘဲ..။ ဟင်းဟင်း...သုတေသနသေသေချာချာလုပ်ပြီးမှ ပြောတာနော့်...။"
ကိုယ်တွေ့ မို့ယုံပါတယ် ခင်ညာ..း)
မမီး sixth sense နဲ့ချော်တောငေါ့ပြီး ကွေ့ သွားတာ ကံကောင်းလို့ ...နို့ မို့ခုလို ဖြစ်ရပ်မှန်တွေ ရေးနိုင်မှာ ဟုတ်ဘူး...း)
ကင်းခြေများသားအမိကုို ကျေးဇူးတင်နေတယ်ပေါ့..အိပ်နေတုန်း ကင်းခြေမျှား..အောင်မငှီး...ဂစ်းD
မီးမီးငယ် September 16, 2013 9:14 PM
ဆုမြတ်မိုး September 19, 2013 10:28 PM
ထူးဆန်းလိုက်တာမမီးရယ် ။ မမီးမှာအတွေ့အကြုံအဆန်းတွေအများကြီးပဲ ဆက်ရေးပါဦးမမီးရယ်..အတွေ့အကြုံတွေကလိုချင်လို့ ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရင်တောင်မရနိုင်ပါဘူးနော်။
မီးမီးငယ် September 19, 2013 10:34 PM
Anonymous September 20, 2013 12:55 AM
Wow, superb blog layout! How lobg have yoou been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your weeb site is
Here is my webpage paul ponna autoblogsamurai
Also visit my blog post baby rugs